MMSC को डाउनटाउन कडा अनुदानको लागि आवेदन दिनुहोस् • DutchtownSTL.org • डचटाउन, सेन्ट लुइस, MO
MMSC को डाउनटाउन कडा अनुदानको लागि आवेदन दिनुहोस्
प्रकाशित अप्रिल 28th, 2021
मिसौरी मुख्य सडक जडान डचटाउन व्यवसायका लागि थुप्रै अनुदान उपलब्ध छन्। यी अनुदानहरु द्वारा वित्त पोषित छन् अमेरिकी आर्थिक विकास प्रशासन व्यवसायहरूलाई COVID-19 महामारीको प्रभावबाट मुक्त हुन र मिसौरी भर लचिलो स्थानीय अर्थव्यवस्था निर्माण गर्न मद्दत गर्न।
ठूलो संस्करणको लागि क्लिक गर्नुहोस्.
भित्रका व्यवसायहरू अर्बनमेन जिल्ला (लगभग ग्रान्ड, मेरामेक, र भर्जिनियाको साथ) व्यवसाय विकास, मार्केटि,, अपरेशन, र अधिकको लागि मद्दतको लागि दुई अनुदानहरूको लागि आवेदन दिन सक्छ। डचटाउन संगठनहरू हाम्रो व्यवसायलाई यी अनुदानहरूको लागि आवेदन दिन मद्दत गर्न तयार छन्।
आवेदन प्रक्रिया एकदम सरल र सीधा छ, र स्वयम्सेवकहरूबाट DT2 ow डाउनटाउन डचटाउन तपाइँलाई लागू गर्न मद्दत गर्न तयार र इच्छुक छन्। हामी तपाईंलाई तपाईंको न्यूनतम कागजातहरू जम्मा गर्न मद्दत गर्न सक्दछौं, साथै तपाईंको व्यावसायको अद्वितीय आवश्यकताहरू सम्बोधन गर्न रचनात्मक प्रस्तावको विकास गर्न।
तपाईंको महामारीको परिणाम स्वरूप तपाईंको व्यवसायले महसुस गरेको कुनै पनि प्रभाव प्रदर्शन गर्न आवश्यक छ। यो राजस्वको घाटा, स्टाफ छाड्नु पर्ने आवश्यकता, वा अन्य प्रतिकूल प्रभावहरू COVID-19 को कारणले ग्रस्त हुन सक्छ।
अनुदान प्राप्तकर्ताहरूले अनुदानको कुल मूल्यको%% राख्नु पर्छ। त्यसो भए, उदाहरण को लागी, यदि तपाईले $5को अनुदान प्राप्त गर्नुभयो भने तपाईले आफ्नो own २$० आफ्नो पैसा लगानी गर्नु पर्छ।
तपाईले April अप्रिलमा अनुदान कार्यशालामा उपस्थित हुनुपर्दछ, वा तपाईले एक समुदाय प्रतिनिधि संगै काम गर्नु पर्छ - चिन्ता नलिनुहोस्, डीटी २ बाट धेरै स्वयम्सेवकहरु कार्यशालामा थिए र तिनीहरू तिमीलाई मद्दत गर्न तयार छन्!
तपाईंलाई पनि डीटी २ support को समर्थनको चिठी चाहिन्छ र हामी पनि त्यससँग मद्दत गर्न पाउँदा खुसी छौं!
हामी तपाईंलाई आवेदन दिन मद्दत गर्न सक्दछौं
अनुदानको लागि आवेदन दिन सहयोग चाहिन्छ? डीटी २ बाट स्वयम्सेवकहरू शनिबार, मे १ तारिखलाई नेबरहुड इनोवेशन केन्द्रमा हुनेछन् १० बिहान pm देखि साँझ from सम्म तपाईंलाई मद्दतको लागि कुनै शुल्क बिना तपाईंको आवेदन पूरा गर्न। हामी तपाईको अर्को अनुदानको प्रबन्ध गर्न सक्दछौं तपाईको अनुदान आवेदन तयार गर्नका लागि तपाईसँग भेट गर्न - मात्र ईमेल nate.a.lindsey@gmail.com.
तपाईं पनि गर्न सक्छन् यहाँ पूर्ण अनुप्रयोग प्याकेट डाउनलोड गर्नुहोस्.
अनुदानहरू जुन तपाईले आवेदन दिन सक्नुहुन्छ
दर्जनौं भन्दा बढी प्रकारका अनुदानहरू छन् जुन व्यवसायहरूले आवेदन गर्न सक्छन् (यद्यपि प्रत्येक व्यवसायले केवल एक वा दुई अनुदानहरूको लागि आवेदन दिन सक्छ)। तर तलका कोटीहरूमा थप, आवेदकहरूलाई पनि रचनात्मक हुन प्रोत्साहित गरिएको छ - MMSC लाई भन्नुहोस् तपाईंको व्यवसायलाई के आवश्यक छ, र अनुदानहरू उपलब्ध हुन सक्छन्।
तल अनुदानहरूको केहि उदाहरणहरू छन् जुन तपाईंको व्यवसायले आवेदन दिन विचार गर्न सक्छ। फेरि, रचनात्मक प्राप्त गर्न स्वतन्त्र महसुस गर्नुहोस्! यदि तपाईंको व्यवसायको अद्वितीय आवश्यकता छ (र ती सबै गर्दछ), हामी ती आवश्यकताहरू प्रदर्शन गर्न तपाईंको आवेदन दर्जी गर्न मद्दत गर्न सक्छौं।
खुद्रा र रेस्टुरेन्टको विकासमा प्रत्यक्ष उद्यमी समर्थन
अनुदान पाउनुहोस् मद्दत गर्न तपाईंको व्यापार सीमा range २,२2,260० देखि,,, ००० सम्ममा। यी अनुदानहरू व्यवसाय मूल्यांकन, एक व्यापार योजना विकास, व्यापार समाधान कार्यान्वयन, स्थानीय सोर्सिंग पहिचान, परिचालन वृद्धि पहल र पावर विकास, र व्यापार पदोन्नति स्थापना गर्न प्रयोग गर्न सकिन्छ।
एक व्यापार मूल्यांकन प्राप्त गर्नुहोस्
पेशेवर परामर्शदाताहरु तपाइँको ब्यापार को स्थिति को मूल्यांकन गर्नुहोस् र सुधार को लागी सुझावहरु बनाउनुहोस् जैसे इन्भेन्टरी कायम राख्नु, नयाँ चलनहरुको शीर्ष मा जान, वा अधिक आकर्षक तरिकामा आफ्नो पसल को मर्चेंडाइजिंग। व्यापार मूल्यांकनका लागि अनुदान $ २,२2,260० को लागि उपलब्ध छ, ११$ initial को प्रारम्भिक 5% म्याच आवश्यक छ।
व्यापार योजना बनाउनुहोस्
के तपाईको ब्यापारमा औपचारिक व्यवसाय योजना छ? प्रशिक्षित व्यापार परामर्शदाताहरूको साथ तपाईंको योजना विकास गर्न सहयोगको लागि आवेदन दिनुहोस्। तपाईको व्यवसायलाई आर्थिक रुपले सुरक्षित गर्न, संचालनमा कुशल र विकासको लागि तयार पार्न रोडम्याप राख्नुहोस्। व्यापार योजनाहरूको लागि अनुदान $ २,2,760० देखि $ ,,4,710१० सम्ममा उपलब्ध छन्। तपाईंको 5% प्रारम्भिक लगानी १$138 देखि २ to$ डलर हुनेछ।
व्यापार समाधान कार्यान्वयन गर्नुहोस्
तपाईंको व्यवसायको आवश्यकताहरू मूल्या assess्कन गरेपछि, परामर्शदाताहरूले प्रस्ताव पेश गर्न सक्दछन् र समाधानहरू कार्यान्वयन गर्न सक्दछ जस्तै स्टाफिंग, बुककीपिंग, र वित्तिय जस्ता समस्याहरूको समाधान गर्न। व्यापार समाधानका लागि अनुदान २,2,760० देखि $ ,,०5,060० सम्म हुन्छ र १f138 to देखि २$253 सम्मको एक अग्रिम खेल आवश्यक छ।
स्थानीय सोर्सिंग पहिचान
स्थानीय अर्थव्यवस्थाको लागि तपाईंको समर्थनलाई अन्य स्थानीय व्यवसायहरूबाट तपाईंको उत्पादनहरू आउट गरेर गुणा गर्नुहोस्। नजिकैको सूची फेला पार्न मद्दत पाउनुहोस्, तपाईंको आपूर्ति श्रृंखला छोटो पार्दै, र व्यापारलाई स्थानीय राख्दै। यी अनुदानहरू $ २,२2,260० देखि, ,,०5,060० सम्म उपलब्ध छन्,% ११5 देखि $ २113 को%% म्याच आवश्यक छ।
अपरेशनल ग्रोथ इनिसिएटिभ र शिफ्टहरू
बढ्न खोज्दै हुनुहुन्छ? परामर्शदाताहरूले तपाईंलाई कर्मचारी थप्न, तपाईंको पसल विस्तार गर्न, वा थप स्थानहरू खोल्नको लागि मद्दत गर्दछ। अपरेशन्स अनुदान २,2,300०० देखि $ ,,4,600०० को लागी र $ ११ to देखि $ २115० को एक अग्रिम खेल आवश्यक छ।
व्यापार पदोन्नतीहरू विकास गर्नुहोस्
विशेष बिक्री, घटनाहरू, र अधिकको वरिपरि निर्मित पदोन्नति योजना सिर्जना गर्नुहोस् जसले तपाईंलाई फराकिलो ग्राहक आधार बनाउन मद्दत गर्दछ। पदोन्नति अनुदान २,2,300०० देखि $,,। ०० सम्म उपलब्ध छन्। प्रारम्भिक%% match ११$ देखि to 6,900$5 सम्मको मिलान आवश्यक हुनेछ।
तपाईंको नयाँ e-वाणिज्य प्लेटफर्म बनाउनुहोस् ग्राहकहरूलाई आकर्षित गर्न जो अन्यथा तपाईंको अगाडिको ढोकामा नहुन सक्छ। वेबसाइट विकासको लागि अनुदान $ 4,600 देखि ,8,000 XNUMX को दायरामा उपलब्ध छ।
तपाईंको ई-कमर्स वेबसाइट बनाउनुहोस्
के तपाईंले आफ्ना ग्राहकहरू महामारीको समयमा अनलाइन किनमेल गर्न को लागी सोध्नु भएको पाउनुभयो, तर तपाईंसँग उनीहरू पठाउन कहिँ छैन? तपाईंको व्यवसायको लागि वेबसाईट र अनलाईन शप विकास गर्न अनुदानको लागि आवेदन दिनुहोस्। व्यावसायिक विकासकर्ताहरूले तपाइँलाई वेब स्टोरफ्रन्ट निर्माण गर्न ग्राहकहरूलाई आकर्षित गर्न मद्दत गर्दछ जो व्यक्तिगत रूपमा तपाइँको पसलमा भ्रमण गर्न सक्षम नहुन सक्छ। वेबसाइट विकासको लागि अनुदान $ 4,600 देखि $ 8,000 सम्म। %% प्रारम्भिक लगानी २$० देखि $०० डलर हुनेछ।
आर्थिक जीवन शक्ति टूलकिट
तपाईंको व्यवसायको सफलताको लागि योजना $ 4,260 बाट $ 11,960 सम्म अनुदानको साथ। यी अनुदानहरू व्यवसाय मार्केटिंग योजना वा मालिक उत्तराधिकार योजना तयार गर्न प्रयोग गर्न सकिन्छ।
व्यक्तिगत ब्यापार मार्केटिंग योजना
तपाइँको पहुँच विस्तार गर्न अवसरहरूको एक विस्तृत श्रृंखला कवर गर्न तपाइँको व्यवसायको लागि अनुकूलित अनुकूलित मार्केटिंग योजना प्राप्त गर्नुहोस्। यी मार्केटिंग योजना अनुदान amounts 9,200 देखि। 11,960 को राशि मा उपलब्ध छन्। प्रारम्भिक खेल $ 460 देखि 598 XNUMX हुनेछ।
व्यवसाय मालिक सफलता योजना
यदि तपाईं अवकाश लिने, तपाईंको व्यवसाय बेच्ने, वा अन्यथा कृपापूर्वक तपाईंको वर्तमान अपरेशनबाट बाहिर निस्किने विचार गर्दै हुनुहुन्छ भने, सल्लाहकारहरूले तपाईंलाई अर्को चरणहरू योजना गर्न मद्दत गर्न सक्दछन्। उत्तराधिकार योजना अनुदान $ 4,260 देखि $ 8,060 मा दायरा, $5$ 213 को एक 403% खेल आवश्यक।
लघु व्यापार विकास सेवाहरू
प्रयोगात्मक व्यवसाय मोडेलहरू $ २,२2,260० देखि $ ,,०6,080० सम्म अनुदानको साथ मैदानमा जान सक्छन्। यी अनुदानहरूमा बजार सम्भावनाको परीक्षणको लागि विशेष कारीगरहरूको उपयोग र सहकारी व्यवसाय मोडेलहरू सामेल छन्।
विशेष कारीगरहरूको उपयोग
स्थानीय निर्मातासँग साझेदारी गरेर तपाईंको व्यापारको प्रस्तावहरू विस्तार गर्नुहोस्। एक स्थानीय डिजाइनरको साथ एक विशेष नयाँ रिटेल लाइन सिर्जना गर्नुहोस् वा क्षेत्र कृषकहरूसँग साझेदारी गरेर एक विशेष मेनू शिल्प बनाउनुहोस्। यी अनुदानहरू $ २,२2,260० देखि, ,,०5,060० सम्ममा उपलब्ध छन्,% ११5 देखि to २113 को।% म्याच आवश्यक छ।
सहकारी व्यवसाय मोडेलहरू
अवस्थित व्यवसायहरूसँग साझेदारी गरेर नयाँ व्यवसाय र विचारहरू परीक्षण गर्नुहोस्। यी अनुदानहरू $ 4,260 देखि $ 6,080 सम्म। तपाईंले initial २१213 देखि $ 304०XNUMX को प्रारम्भिक खेल प्रदान गर्नु पर्छ।
ई-वाणिज्य बिक्री प्रशिक्षण
Online १1,800०० देखि $ ,,२8,260० सम्मका अनुदानहरूको साथ तपाईंको अनलाइन उपस्थितिलाई मद्दत प्राप्त गर्नुहोस्। एक व्यापार सामाजिक मिडिया मार्केटिंग योजना को विकास को लागी अनुदान को उपयोग गर्नुहोस्, विज्ञापन रणनीति अन्वेषण, सामाजिक मिडिया संलग्नता बढाउन, तपाईको ग्राहक आधार विविधीकरण, र प्रयोग र अनलाइन प्लेटफर्महरु मा बिक्री को वृद्धि।
व्यापार सामाजिक मीडिया मार्केटिंग योजना
सामाजिक मिडिया परामर्शदाताहरूले तपाईंलाई विभिन्न प्लेटफर्महरूमा जान र नयाँ र अवस्थित ग्राहकहरूलाई लक्षित गर्ने र लक्षित गर्ने योजना विकास गर्न मद्दत गर्दछ। तपाईं rants, 4,600०० देखि $ ,,7,360० सम्मका अनुदानहरूको लागि आवेदन दिन सक्नुहुन्छ, जुन% २5० देखि $ 230$368 को%% म्याचको आवश्यक पर्दछ।
परामर्शदाताहरु तपाइँ संग तपाइँको व्यापार लक्ष्यहरु मा छलफल हुनेछ, तब तपाइँ ती लक्ष्यहरु मा पुग्न मद्दत गर्न एक विज्ञापन योजना को विकास। यो अनुदान १,1,800०० को लागि हो। $ ० को एक खेल आवश्यक छ।
तपाइँको पहुँच विस्तार गर्न र नयाँ र अवस्थित ग्राहकहरु संग संलग्न गर्न एक सामाजिक मिडिया परामर्शदाता संग काम गर्नुहोस्। एक 1,800 १5०० अनुदान उपलब्ध छ जुन $ ० को 90% मिलान चाहिन्छ।
तपाईंको ग्राहक आधार विविधता दिनुहोस्
नयाँ ग्राहकहरुलाई आकर्षित गर्न मार्केट संचालित रणनीतिहरूको साथ कसरी आफ्नो ग्राहक आधार विस्तार गर्ने सिक्नुहोस्। अनुदान $ २$०० देखि $ ,,०2,300० को दायरा हो, $ ११ to देखि $ २ an an को प्रारम्भिक खेलको आवश्यक छ।
अनलाइन प्लेटफर्महरूमा बिक्री बढाउनुहोस्
के तपाईं पहिले नै अनलाइन बेच्नुहुन्छ? जान्नुहोस् कि कसरी तपाईंको अनलाइन स्टोरफ्रन्टलाई अधिक बिक्रीमा बढि प्रभावकारी बनाउने। यो अनुदान २,2,600०० डलरदेखि, ,,२8,260० सम्म हुन्छ। $ १ to० देखि $ 130१413 को एक खेल आवश्यक छ।
ASAP लागू गर्नुहोस्!
आवेदन अवधि मे on मा समाप्त हुन्छ। यदि तपाईंले हाम्रो याद गर्नुभयो भने नेबरहुड इनोवेशन केन्द्रमा घण्टा खुला शनिबार, मे १, हामी अझै तपाइँको अनुदान आवेदन पूरा गर्न मद्दतको लागि नियुक्तिहरू सेट गर्दै छौं। तपाईं यहाँ अनुप्रयोग डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ.
तल दायर गरिएको कारोबार. सबै कोटीहरू देखाउनुहोस्. कारोबार, DT2, र डचटाउन. कम कोटीहरू देखाउनुहोस्.
यस पोस्ट साझा गर्नुहोस् फेसबुक, twitter, वा मार्फत इमेल। यो पोष्ट अन्तिम पटक अपडेट गरिएको थियो 2nd सक्छ, 2021 .
DutchtownSTL.org कारोबार MMSC को डाउनटाउन कडा अनुदानको लागि आवेदन दिनुहोस्